Ciidanka ammaanka waxaa u furnaa laba tallaabo iney qaadaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidanka ammaanka waxaa u furnaa laba tallaabo iney qaadaan
Ciidanka ammaanku xog wey heli karaan
La daabacay onsdag 24 juli 2013 kl 15.45
Dacwad uu ciidanka ammaanku hoos u dhigay toddobaadkii ina dhaafay oo la xiriirtay nin lagu eedeeyey inuu ku tallaabsaday fal-dambiyeed la xiriira "isku dirka qoowmiyadaha" oo ka dambeeysay qoraal uu ku daabacay bogga twitter-ka.
Iyadoo lagu macneeyey xarunta dhexe ee kombiyuuterka qoraalka lagu daabacay oo ku sugan dalka mareeykanka.
Hase yeeshee waxaa jirasuurtagallo wanaag-san ee ciidanka ammaanku ku ogaan karaan cidda qoraalka twitterka, (facebook ama google) ka dambeeysa, sida uu sheegay gar-yaqaanka ku takhasusay xeerarka is-gaar-siinta oo ka howl-gala jaamicadda Istockholm Daniel Westman:
- Shirkadaha ayaa inta badan haya war-bixinno la xiriira koodadka lagu galo bogagga oo ey culuumaad ka heli karaan ciidanka ammaanku. Dhanka kale waxaa la is weydiin karaa sida ey shirkaduhu u ogol yihiin iney war-bixnnada la qeeyb-sadaan boliiska.
Dooddan ayaa ka dambeeysay qoraal uu shakhsi ku daabacay bogga internet-ka ee twitter, halkaasina ku soo ban-dhigay farxadda iyo mashxaradda uu ka qaaday geeri ku timid gabar soomaaliyeed oo shan jir ah oo meeydkeeda laga helay horraantii bishan luulyo war ku taala Horndahl, nawaaxiga Avesta ee gobolka Dalarna. Falkaasi oo dacwad laga gudbiyey ayuu ciidanka ammaanku sheegay inuu dacwaddii hoos u dhigay maadaama a yxarunta dhexe ee maamulka kombiyuutarka qoraalka lagu daabacay taalo dalka Mareeykanka, isla-markaana aaney suurtagal ahayn in war-bixin laga helo. Hase yeeshee looma baahna in habkaa loo howl-galo, sida uu sheegay Daniel Westman. Ciidanka ammaanka iyo xeer-ilaaliyuhu war-bixin ayey heli karaan xaaladaha qaarkood:
- Runtii laba dhabbo ayaa la qaadi karaa midkood. Ama in si toos ah loola xiriiro shirkadaha oo mararka qaarkood ka baaraan-dega in codsigan yahay mid ey ogolaan karaan oo ey war-bixinta ku gudbin karaan. Iyo dhabbada labaad ee ah in si toos ah loola xiriiro hayadaha dawladda mareeykanka oo laga dalbado in war-bixinta summadda loo soo gudbiyo.
Hase yeeshee halkaa waxaa jira shuruud ay khasab tahay in la buuxiyo. Kuma filna oo keliya in codsiga la dhiibayo uu la xiriiro dacwad fal-dembiyeed dembi ka ah dalkan:
- Si hayadaha mareeykanku ugu khasbaan in shirkadaha ku howl-lihi u gudbiyaan war-bixinta waa in falkaasi uu dembi ka yahay dalka mareeykanka qudhiisa.
Waana mid fikirkiisa ey ku kala duwan yihiin xeerarka u deg-san waddammada mareeykanka iyo Iswiidhen falkan eynu iminka ka hadleeyno, sida uu sheegay Daniel Westman:
- Xeerarka u deg-san dalka mareeykanka ayaa mudnaanta koowaad siiya xoriyadda qoowlka kolka loo barbar-dhigo dembiga iska-hor-keenka qowmiyadaha kala duwan, ayna dhici karto in aanu falkaasi ka noqon lahayn dalka mareeykanka.
Halka uu xeerarka dalkani kaga adag yihiin dembiyada iska-hor-keenidda qowmiyadaha miyaad ula jeeddaa?
- Haa, dalka Iswiidhen falkani waa mid xadka heehaabaya. Inuu yahay fal-dembiyeed la xiriira isa-hor-keenidda qoowmiyadaha iyo inuu yahay un fal laga yaqyaqsado. Balse waxay u eg tahay inaannu dembi ka noqon lahayn dalka mareeykanka.
Marka waxay ku xiran tahay in falkani yahay mid dembi looga aqoon-san yahay dalka mareeykanka iyo in kale, kolka la eego xeerka waddanka mareeykanka, si uu ciidanka ammaanka ee dalkani uu uga heli lahaa war-bixin la xiriirta cidda qoraalka ka dambeeysay.